ပစ္စည်းပျောက်မယ် သတိထား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » ပစ္စည်းပျောက်မယ် သတိထား
Posted by ဆူး on Jan 8, 2011 in Drama, Essays.., My Dear Diary | 15 comments
ဆူး စိတ်ကူး ပစ္စည်းပျောက်မယ် သတိထား
ရန်ကုန်လေဆိပ်ကနေ ဖြတ်ပြီးမှ လာကြမဲ့ သူတွေ အထူး သတိထားကြပါ X-ray နဲ့ စစ်ပြီး လက်လှမ်းမှီတဲ့ နေရာလောက်မှာ ရှိတဲ့ ပစ္စည်းမျုားဆို သော့ဖျက် အိတ်ခွဲ နိုက်ယူပါတယ်။ လက်နဲ့ နှိုက်ယူလို့ အဆင်မပြေတဲ့ ဟာများကျတော့ မြေဖြူ ကြက်ခြေခတ်ပြီး ဖွင့်ပြီး စစ်ဆေးခိုင်းပါတယ်။
သေတ္တာတွေထဲ ထည့်ထားတဲ့ ပစ္စည်းများ လေယာဉ်ပေါ် လက်ဆွဲ ယူသွားလို့ မရတဲ့ ပစ္စည်းများ အပ်ပြီး လေယာဉ်ပေါ်ဆင်း အထုတ် လက်ထဲ ရောက်တော့ တချို့က ဘာပါသွားလို့ ညာပါသွားလို့.. တန်ဖိုး သိပ်မရှိလည်း ယူတာဘဲ.. ဘာလာလာ ယူတာဘဲ.. သေတ္တာမှာ နံပါတ်လှည့်ပြီး ခေတ်တဲ့ သော့တောင် 000 ကနေ နံပါတ် မလဲ ထားတော့.. 000 ရောက်အောင် လှည့်ပြီး ဖြုတ်ယူသွားတာလည်း ရှိတယ်။ ဘာမှ မဟုတ်တဲ့ အသေး အမွားက အစ အကုန် ရရင် လိုချင်တယ် ဆိုတဲ့ မတော် လောဘတွေ မတရားကြီးမားနေတယ်။ ဥပမာ ခရီးထွက်တုန်း ကင်မရာရိုက်ခဲ့တာတွေ စိတ်ချလက်ချ သေတ္တာထဲ ထည့်သိမ်ပြီး ပြန်လာတယ် လမ်းမှာ ဖြတ်ယူသွားတယ် (ခိုးတယ်) ပေါ့လေ.. ကင်မရာလည်း ဆုံး ခရီးစဉ်မှာ အမှတ် တရ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေလည်း ဆုံးပေါ့။ ခရီး တခေါက် တခေါက် ထွက်ဖို့ ဆိုတာ လွယ်မှ မလွယ်တာ လူကလည်း အပင်ပန်း ခံနိုင်မှ ပိုက်ဆံကလည်း အကုန်ခံနိင်မှ အချိန်ကလည်း ပေးနိုင်မှ.. အမှတ်တရတွေ ဖြတ်ယူသွားတယ်။ လက်ထဲ ရောက်တော့ ပုံတွေ format ချပြီး သခိုးဈေးနဲ့ ရောင်းစားအုန်းမှာ.. ၀ယ်တဲ့ လူက တန်ကြေးကြီးကြီး ပေးဝယ်ထားတာ ရောင်းစားတဲ့ လူက မတန်တဆ ဈေးနိမ် ရောင်းစားအုန်းမှာ။
Battery အားသွင်းတဲ့ ဟာလေးလည်း တခါ ပါသွားပြီးပြီ။ အခု တခေါက် ကင်မရာ အလုံးလိုက် မသွားတယ်။ လေဆိပ်မှာ အထုတ်ကလေး ကိုယ်ဟာကို ဆွဲလည်း မရဘူး အတင်း အလု အယက် ဆွဲ.. ပြီးတော့ ၅၀၀ ပေးလို့ မကျေနပ်.. ၁၀၀၀ ပေးလည်း မကျေနပ်.. ဘယ်နှစ်ယောက် ဆိုတာက လာသေးတယ်။ စိတ်အနှောက်အယှက် အရမ်းပေးတယ်။
ဝေစားမျှစားနေကြတော့ မျက်စိပိတ်ပေးထားကြတာ ဖြစ်မှာပေါ့။
ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ ဒီလို အိနြေမရ မဖြစ်ဘူး အားလုံး အေးဆေးဘဲ။
ဖျတ်ဖျတ်ကိုလူး စပ်စလူး ထနေတာ မြင်မကောင်းဘူး။
အားလုံးက သူနေရာနဲ့ သူ့စည်းကမ်း ဖြစ်ရမှာ.. အခုတော့ သူနေရာနဲ့ သူ့ခွဲတမ်း ဖြစ်နေကြတယ်။
ရန်ကုန်လေဆိပ်ကတော့ နံမည်ကြီးပဲ … အဲဒီထက်ဆိုးတာက မန္တလေးလေဆိပ် … တရုတ်လေယာဉ်ဆိုက်ရင် အတင်းပိုက်ဆံတောင်းတာ .. သူတောင်းစားတွေ တောင်းသလိုပဲ … ရှက်ဖို့အရမ်းကောင်းတယ် …
ငါတို့မြန်မာပြည်ဝယ်…သိတဲ့အတိုင်းပေါ့ကွယ်….ပါလာသမျှတွေ …၀ိုင်းခိုးကြတယ်…ဒေါ်လေးဆူးခမျှာ ခံလိုက်ရလေတယ်….နောင်လာနောင်သားတွေ….သတိထားသင့်တယ်…ကိုခိုင်တို့နဲ့အပေါင်း ပါတွေရယ်….ဤစာသား၌ ဗိုလ်အောင်ဆန်း သံစဉ်ပါရှိပါသည်။
ဒီလိုနေရာမျိုးကရိုးရိုးသူခိုးနဲ့ရိုးရိုးသူတောင်းစားမဟုတ်ဘူး လိုင်စင်ရသူတွေဖြစ်ရမယ် ခေတ်မှီတိုးတက်သောနိုင်ငံတော်ကြီးကမွေးထုတ်ထားတာတွေပါ….
အခိုးခံလိုက်ရတဲ့ ကင်မရာအမျိုးအစားကို ဈေးကောင်းပေးဝယ်မည်လို့ လေဆိပ်ကြော်ငြာသင်ပုန်းမှာ ကပ်ထားလိုက်ပါလား။
ပေါ့သေးသေး သူခိုးမှ မဟုတ်တာ … ကြော်ငြာသင်ပုန်းသွားကပ်ထားတော့ မောတာပဲ အဖတ်တင်မှာပေါ့ ..
အင်း…ကိုကြောင်ကြီးပြောတဲ့အတိုင်းသာကြော်ငြာကပ်လိုက်လို့ကတော့…ဒေါ်လေးဆူးခမျှာတော်တော့်ကို အလုပ်ရူပ်သွားမှာပဲလို့တွေးမိတယ်….ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့…ဒေါ်လေးဆူးရဲ့ကင်မရာလိုမျိုး အမျိုးအစားတူတွေ သူတို့ဆီမှာအများကြီး ခိုးပြီးနေလို့ပါပဲ…..နောက်များမှ ကျွန်တော့်ရဲ့ကိုယ်တွေ့လေးတွေ ရေးပေးပါအုံးမယ်….
ယူအက်စ်မှာဆိုရင်တော့ .. သတင်းသမားက ..သတင်းလုပ်တော့မှာပဲ..။
လေယဉ်ပေါ်မတက်ခင်.. .. ထည့်တဲ့ပစ္စည်းတွေ .. ဗီဒီယိုရော..ဓါတ်ပုံရောရိုက်..
ပြီးရင်… အားလုံးရှေ့ တင်… အထုတ်ဖွင့်ပြီး.. ပြန်ရိုက်..။
ဟိုက..သူခိုးတွေလည်းပြုတ်..။ သတင်းသမားလည်း.. ၀င်ငွေရ..။
တော်သေးတယ်……….. လေယာဉ်ကွင်ိးကု အနားတောင် မကပ်နိုင်သေးလို့ နို့မို့ဆို နက်သုံးမယ့်ပိုက်ဆံလေး ပါသွားရင် အခက်…………:P
အဝေးက ပြန်လာမဲ့ လူတွေ သတိထားမိအောင် သတိပေးတဲ့ သဘောပါ.. ဆင်ခြင်မှုတွေ ရှိတော့ အပျောက်အရှ သက်သာအောင်လို့ပါ။ ကိုယ့်လို မဖြစ်အောင် ကိုယ်တွေ့ကို အရင်းခံ လက်တို့လိုက်ရပါသည်။
ရန်သူမျိုး ငါးပါးတို့ ဖျက်ဆီး၍ မရလတ္တံ့ ဆိုဘဲ
စသိသိချင်းတော့ တော်တော် စိတ်မကောင်း ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ နောက်တော့ ပုံမှန်ဘဲ.. စိတ်ခံစားမှု သိပ်ပြင်းထန်တာတွေ ဖြစ်ပေမဲ့ ခဏတာ ဆို အလိုလို ခံနိုင်ရည်ရှိသွားတယ်။
အင်း တရာ ပေါက်သွားပြီပေါ့ရေ…….. ချူးမ ဟုတ်လား
တရားသဘောနဲ့ ဆင်ခြင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ဒါရှိလို့ ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခလို့ပြောရမှာဘဲ။
ပိုက်ပိုက် မရှိရင် လေယာဉ်စီးလို့ မရ။
လူတွေပြောနေကြတာ ဘာမှ မမြဲဘူးဆို.။